အဆမတန်ကြီးမားအင်္ကျီ Dress | Buddhatrends
$51.00 $60.00 သငျသညျ (15% Save$9.00)
Claret / S က Claret / M က Claret / L ကို Claret / XL Claret / XXL Claret / XXXL Claret / 4XL Claret / 5XL ရေတပ်အပြာရောင် / S က ရေတပ်အပြာရောင် / M က ရေတပ်အပြာရောင် / L ကို ရေတပ်အပြာရောင် / XL ရေတပ်အပြာရောင် / XXL ရေတပ်အပြာရောင် / XXXL ရေတပ်အပြာရောင် / 4XL ရေတပ်အပြာရောင် / 5XL အဖြူ / S က အဖြူ / M က အဖြူ / L ကို အဖြူ / XL အဖြူ / XXL အဖြူ / XXXL အဖြူ / 4XL အဖြူ / 5XL စပျစ်ရည်ကိုနီ / S က စပျစ်ရည်ကိုနီ / M က စပျစ်ရည်ကိုနီ / L ကို စပျစ်ရည်ကိုနီ / XL စပျစ်ရည်ကိုနီ / XXL စပျစ်ရည်ကိုနီ / XXXL စပျစ်ရည်ကိုနီ / 4XL စပျစ်ရည်ကိုနီ / 5XL
Claret, ရေတပ်ပြာ, အဖြူနှင့်ဝိုင်နီထဲမှာရရှိနိုင်။ အရွယ်အစား 5XL မှတက်က S ထံမှစတင်ပါ။ စတော့ရှယ်ယာထုတ် run မတိုင်မီယခုသင့်လှည်းဤထည့်ပါ။
ပစ္စည်း: Cotton, Viscose
Рубашкасинтереснымкроем, тканьдляхлопкатяжёлая, думаюбудетжаркоЛетом, швыровные, цветнетакойяркийкакнафото, размерсоответствует!
12.03 поС 20.04 СДЕКпоМосквыдо။ Отлично! Спасибо
ငါ *** ဂရမ်
အေးမြအလွန်ကောင်းတဲ့, QUALITY ရူပ, 10 ရက်, စပိန်ယူကအရမ်းဖက်ရှင်အကြောင်းအရာဝယ်ယူရောက်ရှိ
M က *** ဎ
ငါ *** y က
အလွန်အေးရှပ်အင်္ကျီ, ထွက်ကပ်ချည်)2ပတ်သို့ရောက် လာ. , ဒါပေမယ့်ငယ်သောအရာတို့ကိုပဲ! ငါ) ထက်ပိုသောအမိန့်ပါလိမ့်မယ်
, G *** တစ်ဦး
cool ရှပ်အင်္ကျီ။ ကိုယ်ခန္ဓာကိုမှသာယာသောဝါဂွမ်း, အလင်း, ။ ချည်ကပ်, неприглядностиကိန်းဂဏန်းဖုံးကွယ်မထားဘူး။ ယင်း၏ 54 မှ 4xl, ကသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားအမိန့်ဖြစ်နိုင်ခဲ့အနည်းငယ် bolshevat အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ရုံဒူးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 164 များ၏ကြီးထွား။ ရောင်းသူကိုချက်ချင်းအမိန့်ကိုစလှေတျသောကြောင့်ရက်သတ္တပတ်-စူပါအစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်းင်နှစ်ခုအတွင်းသို့ရောက်လာသော! ငါရောင်းချသူနှင့်ရှပ်အင်္ကျီအကြံပြု!
တစ်ဦးက *** v
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးရှပ်အင်္ကျီအရောင်ကိုဓာတ်ပုံကနေအနည်းငယ်ကွဲပြားပေမယ့်အဲဒါကိုလုယူမထားဘူး။ စူပါအစာရှောင်ခြင်း 8 ရက်ပေါင်းတင်ပို့။ ရောင်းသူ5+ + + + + ။ ငါရောင်းချသူအကြံပြု!
ထိုကဲ့သို့သောမြှောင်းပုံအဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖို့ပုံမှန်မဟုတ်သောစတိုင်သိပ်သည်းပစ္စည်းချောမွေ့, အဆစ်ကောင်းပါတယ်, (ချည်၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုပယ်ဖြတ်လ, ငါကအားလုံးတစ်ခညျြးနှီးဆှေးနှေးင်ထင်) ။ ဒါပေမယ့်မော်ဒယ်ကိုယ်တိုင်ကဆေးရုံဂါဝန်ကဲ့သို့အမီတာ-သက်သေပြလွန်းကြီးတွေ, ရှပ်အင်္ကျီအမိန့်ရုရှား s မှာအခမဲ့ဖြတ်အတူလွဲချော်။ နှင့်အရာခပ်သိမ်းကောင်းသောကောင်းသောရောင်းချသူတစ်ဦးတစ်လအကြောင်းကိုပေးပို့ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက *** ဎ
Delivery ငါအကြံပြုထူထည်သာယာသော, ဇီးသီးအရောင်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ရှပ်အင်္ကျီ, ရင်ဘတ် 120 အခမဲ့ပေါ်တွင်အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာ updated ခဲ့, ကောင်းသောထုပ်ပိုး, အစာရှောင်ခြင်း
ဂရိတ်ရှပ်အင်္ကျီ ..... အစာရှောင်ပေးပို့ .... နည်းနည်းထူးဆန်းဒီဇိုင်း။
M က *** y က
ဒါဟာတူညီတဲ့ဒီဇိုင်းငါ၏တတိယအပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးကိုအရောင် မှလွဲ. ok ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းနည်းမှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်အဟောင်းကြည့်ရှုအဆိုပါမုန်ညင်းအရောင်။ လျှင်အဖြစ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဝတ်ဆင်ခဲ့သညျ။ ဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့ကလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ငါကပိုမောင်းသောအထည်အရောင်ကြိုက်တယ်။
hopw wont ကဆေးကြောပြီးနောက်ကျုံ့
: P *** ဏ
нарештідочекаласьпосилки။ လှပသောရှပ်အင်္ကျီ, дякую။
J ကို *** r
ရှည်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်, ကောင်းစွာကိုက်ညီခြင်းနှင့်အရောင်, ပစ္စည်းများနှင့် finish ကိုအလွန်ကောင်းလှ၏။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
: D *** ခ
V ကို *** ဏ
စူပါထုတ်ကုန်, စူပါဝန်ဆောင်မှုစူပါရောင်းချသူ !!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!
: P *** v
Excellent ကရောင်းချသူ။ အရည်အသွေးကောင်း။ အရွယ်အစား-ကိုက်ညီတဲ့။
အလွန်မြန်ဆန်စွာဖြန့်ဝေ! တစ်စက္ကန့်အမိန့်, 5xl 54 ကြီးတွေ 4xl အချိန်တွင်အမိန့်ထုတ်
V ကို *** အို
M က *** z
ပုံအဖြစ်စားဆင်ယင်နဲ့တူအင်္ကျီ, အထည်အထူ, က c / ခ, အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီး။
ယင်းရှပ်အင်္ကျီထိပ်ပေါ်မှာအမြဲအဖြစ်အရည်အသွေး, အချိန် လာ. ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရှပ်အင်္ကျီစူပါ !!!!!! ဝါဂွမ်းပစ္စည်း !!!!!!!!!! ကျွန်တော်အကြံပြုသည်မှာ!!!!!!!!!